Aragtida Qurba-Joogta Marka Ay Kasoo Noqdaan Waddankii. | Somaliland Today
← Wasiirka Duulista Iyo Dhalinyarada Uu Sidaa Hufan Uu Tababaray Ee Ka Hawl-gasha Madaarku , Waxay Tusaale U Tahay Horumarka Uu Dalku Gaadhay. Qalinkii Abokor qaasim xasan
Xuska 30-Guurada Maalinta Shuhadada ee SNM 17/10/1984kii  17/10/2014ka,Qalinka: Boobe Yuusuf Ducaale. →
Aragtida Qurba-Joogta Marka Ay Kasoo Noqdaan Waddankii.
Qofkasta oo waddankii taga wakhtiyada fasaxa, waxuu kala yimaadaa xusuus u gaar ah iyo waxii uu kusoo arkay waddankii, hana noqoto mid togan ama tabane.
Dadka qurbo-jooga ahi kala indheer garadsan, kala aqoon badan, kala xil-kasnimo badan, haddana kala qiimayn og waxyaalaha ay kala kulmaan waddanka.
Qiimaynta dalka iyo dadkaba isku si loogama warramo, sidaa awgeed ayaa qofka indheer garadka ahi, waxuu kaaga warramayaa xaalada uu kusoo arkay dalkii iyo dadkii.
Horumarka waddamada iyo bulshooyinka dunida ee dhinacyada, nolosha, dhaqaalaha , waxbarashada iyo tiknoolajiga waxaa hoggaanka u haya waa madaxda ay doortaan iyo shacabka oo la socda, taasoo ay isla yaqiinsanyihiin hadafka iyo heerka ay higsanayaan, waxaanay mar walba eegaan
in qorshayaasha ay rabaan inay gaadhaan sii dersaan, dejiyaan haddana u dedaal ficilka iyo ka midho dhalinta.qorshayaashaas.
Haddaba dhisida dal waxaa ka horraysa dhisida dadkii isbedelka keeni lahaa, ee dhisi lahaa waddanka, ee noqon lahaa ummad meel higsanaysa, haddii dadku aanu dhisnayn, caqli ahaan, akhlaaq ahaan , aqoon ahaan iyo karti ahaan midna, waxaa hubaal ah inaan dhisme waddan iyo horumar midna la gaadhaynin, laakiin bil cakis hoos loo sii soconayo.
Shayga qudha ee qurba jooga indheer garadka ah ay kaaga warramayaan, ama kusoo arkeen waddankeena waa mid kaa nixinaysa runtii, waana mid xaqiiqo ah oo jirta,haddii sidaas lagu sii socdana ay iman doonto laciifnimo, iyo bulsho baaba’
1- SIRTA NOLOSHA OO LA HAREER MARAY – Aqoontu qofka way bedeshaa, dhaqan ahaan , akhlaaq ahaan iyo fikir ahaanba, laakiin aqoon-yahanka ummadeenu ee la odhan karo aqoontii dhabta ahayd ayuu sidaa waa uu yaryahay. Aqoontaadu ha noqoto mid adiga waddada wanaagsan iyo horumarka ku gaadhsiisa, ha ku tusto qiimaha wakhtigu leeyahay, ha kaa dhigto inaad noqoto qof wax soo saar leh, oo aan cid ku tiirsanayn, aqoontu hoos yaanay kuu dhigin ee sare ha kuu qaado, ha kaa dhex saarto hogga dullinimada ah ee inbadan oo bulshada ka mid ahi ku dhex jirto. Wakhtigii waxa uu noqday shayga uGu qiimaha hooseeya ee dadka inta badan luminayaan, nolosha hadafkeediina waa ka lumaya qofka aan wakhtigiisa nidaamin sirtiii noloshana wuu ka dhacayaa. Wax walba meel aanu lahayn ayaynu dhignay.
2– QAADKA – Bulshada in kabadan 50% ayaa qaad cun ah. Dullimo dhammaanteed ayuu leeyahay qaadku, Qofkan qaad cunka ah, hammiga qudha ee uu sidaa waxaa weeye siduu u heli lahaa qaadka uu maanta cuni lahaa, sidaa awgeed nolosha dhabta ah xayn-daabkeedii wuu ka baxay. Qaadku waxuu inagu hayaa dhibaato aan indheer garadka mooyee cid kale dareemayn, dhibaato sahlan maaha, waxaa muuqata in bulshadu “TIRTIRMI” doonto oo asal guuri doonto hadii sidan xaaladu kusii socoto. Qaadku waxuu buburiyay dhammaan hammigii iyo fikirkii shakhsiga, akhlaaqdii, diintii, kartidii iyo awoodii maskaxeed, waxaad is odhanaysaa waa maandooriyaha keliya ee dhibkiisu dhinac walba qofka ka saameeyo. Wiil ka mid ah qurba jooga ka tagay waddankan Qatar, ayaan dhawr cisho ka hor taleefanka ku waraystay, anoo waydiinaya xaalada waddanka iyo guud ahaan dadka. Runtii ilmo ayaa igu soo istaagtay waxyaalaha uu iiga warramayay, waxaanu hadalkiisii kusoo koobay ” Axmedow, dadkii waxaad is odhanaysaa, qaar badan wakhti hore ayay waasheen ee cidbaan dhakhaatiir gaynin, maskax ahaanna inaanay fayoobayn ayaad kasoo qaadaysa.
3-QABYAALAD IYO MADAX BILAA DAMIIR AH – Maamulka ummadi yeelataa waa kursiga laga hoggaamiyo horumarka bulshada iyo dalka, laakiin waxa qudha ee ay qurbo jooga indheer garadka ahi soo arkaan, madax bilaa damiir ah, karti daran, bilaa qorshe ah, qaad cun ah, aragti gaaban, qabyaaladaystayaal ah, xaaraan cun ah, shaqada ummadu u diratayna aan u gudan sidii laga filayay. Miisaanka qudha ee ay ku shaqeeyaan waa QABYAALAD, waxa qudha ee ay ka fikiraan waa kursigooda iyo inta uu ka helayo , ma jirto cid la xisaabtantaa, waxaa sida la doono loogu talax tagaa xoolaha bayti maalka ee ummada laga guro.
Waxaan kusoo gunaanadayaa, dal horumarkiisa waxa qudha ee keenaa waa dad hadaf leh, oo aqoonteeda leh, halka ay usocdaan iyo halka ay taagan yihiin garanaya, laakiin taasi ma muuqato.
Ahmed M. Hassan.